२०७४–चुनाव – Page 40 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
‘मोष्ट वान्टेड’ सुचीमा रहेको रेशम चौधरी २१ हजार मतअन्तरले विजयी
धनगढी, २६ मंसिर । प्रहरीको ‘मोष्ट वान्टेड’ सुचीमा रहेको रमेश चौधरी कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । राजपाका उम्मेदवार चौधरीले विपक्षमा रहेका वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई झण्डै २१ हजार मत अन्तरले हराएका हुन् । चौधरी ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित हुँदा उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदन […]
मतदाताले वाम गठबन्धनको प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई बुझ्न सकेनन् : देजमो
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) समर्थित देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्ने जनसमुदायलाई धन्यवाद दिंदै चुनावी परिणामका विषयमा मतदाताले वाम गठबन्धनको जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई ठिकसँग बुझ्न नसकेको पाइएको जनाएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कालोधनको खोलो बगाएर जनताको मतलाई […]
निर्वाचन उपयोग र परिणामलाई बुझ्ने सन्दर्भमा
१. विषय प्रवेश दशवर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनले सामन्तवादको मूल नायक राजतन्त्रात्मक सत्ताको जरा मात्र हल्लाएन, राजतन्त्रलाई काँध हालेर बसेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)जस्ता यथास्थितिका पक्षधर पार्टीहरुलाई पनि संवैधानिक राजतन्त्रको कथित खोक्रो नारालाई फाल्न बाध्य पा¥यो । तर विडम्बना के भइदियो भने सत्ता राजाको हातबाट त खोसियो तर सर्वहारावर्गको हातमा आउन सकेन । […]
‘क्रान्तिको तयारीमा निर्वाचन उपयोगले विशिष्ट योगदान पु¥याएको छ’
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले निर्वाचनको उपयोगबाट पार्टी तथा मोर्चाको राम्रो जनाधार तयार भएको बताउनु भएको छ । वर्गदृष्टि साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गजुरेलले जनता भ्रममा परेकाले वाम गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचन परिणाम देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कथित वाम गठबन्धनको भ्रमको हुरीबतास जुन आयो त्यसले गर्दा सच्चा […]
संसदीय निर्वाचनको नाटक मञ्चन समापनः राष्ट्रघाती, जनघाती र भ्रष्टाचारीहरुको पुनरागमन
नेपाली कांगे्रस, एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा ‘उत्कृष्ट’ भनिएको संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको निर्वाचनअन्तर्गत संघीय संसद् अथवा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक संसद् अथवा प्रदेशसभाको चुनाव भैसकेको छ । निर्वाचन पश्चात मतगणनाको कार्य पनि अन्तिम दिशातर्फ उन्मुख भैरहेको छ । त्यसक्रममा पहिले अनुमान गरेअनुसार नै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) का बीचमा निर्माण भएको ‘वाम’ गठबन्धनले अत्यधिक बढीमत […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Feature News, Tippani Bislesion
देजमोका उम्मेदवारहरुद्वारा “मुठ्ठी” चिन्हमा मतदान गर्ने मतदाताप्रति धन्यवाद ज्ञापन
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका उम्मेदवारहरुले “मुठ्ठी” चिन्हमा मतदान गर्नुहुने मतदाताहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । देजमोका उम्मेदवारहरुले चौतर्फी कथित वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घेराबन्दीका बीच देजमोका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आ–आफ्ना फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै हार्दिक आभार व्यक्त गरेका हुन् । पार्टी तथा मोर्चाको निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति अनुसार चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरुले […]
४५ जिल्लामा खस्यो मात्र ६७ प्रतिशत मत
काठमाडौं । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ४५ जिल्लामा ६७ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरदर ६७ प्रतिशत मत खसेको दावी गरे । सबैभन्दा धेरै गुल्मीमा ७१ प्रतिशत मत खसेको छ । निर्वाचन […]
सिके राउतको गाउँमा मत खसेन
सप्तरी । सप्तरीको महदेवा गाउँपालिकाको महदेवास्थित प्रावि केन्द्रमा विहीबार मध्यान्हसम्म कुनै पनि मतदाताले मतदान गरेका छैनन् । अलग तराईको माग गर्दै आएका सिके राउतको घर रहेको उक्त महदेवा गाउँमा मत नखसेको निर्वाचन अधिकृत धनेश्वर साहले जानकारी दिएका छन् । मतदान गराउने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु बिहानैदेखि यहाँ तयारी अवस्थामा बसे पनि कुनै मतदाता मत खसाल्न आएका […]
पत्रकारहरुलाई तत्काल रिहा गर्न क्रान्तिकारी महासंघको जोडदार माग
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले एक वक्तव्य जारी गर्दै गिरफ्तार गरिएका जनपक्षीय पत्रकारहरुलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउतको हस्ताक्षरमा बिहीबार जारी प्रेस वक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो । महासंघको वक्तव्यमा भनिएको छ, “विगतको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा शाही राजतन्त्रकालीन शासकहरुलाई बिस्र्याउनेगरी जनपक्षीय श्रमजीवी […]
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तर्फ दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा आज निर्वाचन हुँदैछ । मतदानको लागि बिहान सात बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्मको समय निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको छ । ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२८ र प्रदेशसभाका २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि एक हजार ६६३ र प्रदेशसभाका लागि २ हजार […]